12-Kaviri mechina chisimbiso Dhizaini Fermentation system
Pasi pekugadzika bioreactor
5 litre Fermenter Basa mavhoriyamu kubva ku2 Liters
50 litre Fermenter Basa mavhoriyamu kubva ku20 Liters
500 litre Fermenter Basa mavhoriyamu kubva ku200 Liters
Kuongorora kweAeration uye kutonga
Bomba uye vharafu
Software: Motorola S7 + YOKUFUNGA MAHARA
Kuunganidzwa kwedata uye module yekudzora: Motorola S200 PLC controller uye kuunganidzwa kwedata uye module yekudzora
2. Kuyera basa: inogona kudyisa, bubble muvengi, senge kuyera pH
1) kuratidza kuti iyo yese parameter yeiyo maitiro Curve kuongororwa
2) kuchengetedza, kuratidza, ongorora ese epamidhi curve paramita
3) inogona kuratidza iyo yese paramita ye batch mushumo
4) kopa iyo data zvakananga ne USB
5) data yekuchengetedza fomati inoenderana neECCEL, EXCEL chikuva inogona kubata
6. Inogona here nzira kudzora parameter, imwe paramende inogona kuva ne 10 block inogona kuiswa
7. Nguva yekuratidzwa kweparamende yega yega yekurebesa nguva inogona kugadziriswa
8. Maviri ma paramitha anogona kuitiswa necreen screen uye calibration
10. Imwe neimwe paramendi yeiyo inotapira ndeyakazvimiririra modules, pasina kuvhiringidza mumwe neumwe, kuitira nyore kuchengetedza
11.PH, DO uye mamwe ma parameter ehutongi uye anobatana mahedhiyo anogona kugadziriswa
2. Inogona kutumirwa pasi pezvakadzora zvinoshandurwa magadzirirwo uye control parameter, kushanda kure
3. Inogona kuiswa kutevedzana kudzora
4. Inogona kunyora kure-mutsara parameter, uye zvinyorwa zvinoratidza
- Unogona kusarudza yakasiyana nguva yekutanga uye nguva yenguva (8,24,48,72,96 uye maawa 144);
- Unogona kuseta kumusoro uye yakaderera curves kuratidzwa, kuitira kuti uvandudze kuratidza resolution;
- Unogona kusarudza chero akati wandei mabheki akasiyana (1-10) curve zvakare inoratidza izvozvo zvekuenzanisa kuongororwa;
6. Revera Kudhinda
- inogona kuratidza yakakosha 1-12 (chero yakaiswa) data, uye yekudhinda kubuditsa;
- Unogona kusarudza imwe nguva yekutanga nenguva uye unogona kusarudza nguva dzakasiyana-siyana (1,5,15,30,60 maminitsi);
- Unogona kusarudza chero akati wandei mabheki (chero akaiswa) dhata, uye nekudhinda kuburitsa,
- Kuenzanisa kuongorora;
7. kupurinda kupurinda
- Unogona kuratidza curve rakadhindwa nemuvara printer;
Technical paramende: Chinyorwa uye rudzi rwezvakakosha zvikamu
Iyo humburumbira yakagadzirirwa nekambani yedu inoshandisa simbi isina simbi
Inogadzirisa Nzira the magnetic structure and top driven by the mechanical coupling
Kuwedzeredza Kugadziriswa (kusarudza) Liquid level control, feed weighing system, multifeeds & online testing of the content of methanol and ethanol, detection of O2 & CO2 exhausts